Tajima-Jiayuan Ultra Lightweight Vehicle ကိုဖော်ပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Tajima Motor Corporation! – AutoMyanmar
Tajima-Jiayuan Ultra Lightweight Vehicle ကိုဖော်ပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Tajima Motor Corporation!
Tajima Motor Corporation ဟာပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ Automotive world မှာ Tajima-Jiayuan Ultra Lightweight Vehicle ကိုဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Tajima Motor Corporation ဟာ ပြိုင်ကားတွေကိုဖန်တီးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ကားတွေဖန်တီးတဲ့ ကုမ္ပဏီဆိုပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က Electric Vehicle (EV) တွေကိုလည်းတီထွင် ဖန်းတီးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုတော့ EV အသေးစားလေးဖြစ်တဲ့ Tajima-Jiayuan ကိုတော့ Automotive World မှာချပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Tajima-Jiayuan ဘက်ထရီပါဝင်တဲ့ EV ပါ။ ၈ နာရီအထိ ဘက်ထရီ သွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ၉၀ ကီလိုမီတာ အထိမောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နာရီ အများဆုံးမောင်းနှင်နိုင်တဲ့နှုန်းကတော့ ၄၅ ကီလိုမီတာပါ။ Tajima-Jiayuan ဟာ သေးငယ်တဲ့ EV ကားဖြစ်ပြီး အနံက ၂၅၄၅ X, အလျားက ၁၂၉၀ X, အမြင့်ကတော့ ၁၅၇၀ မီလီမီတာ ပဲရှိပါတယ်။ သေးသေးပုပုလေးနဲ့ မောင်းသူရယ် ခရီးသည်တစ်ယောက်သာ စီးနှင်းနိုင်တဲ့ယာဉ် (FA တွေအတွက်မဟုတ်ပါ 😜) ဖြစ်ပါတယ်။
သေးသေးလေးဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင် ပါကင်ထိုးရတာတော်တော်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ ကား လို့ဆိုရမှာပါ။ စျေးနှုန်းအပိုင်းကတော့ ဂျပန်ငွေ ၁,၁၇၀,၀၀၀ ယန် ပါ။ မြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်ရင် သိန်း ၁၄၀ ကျော်လောက်ရှိမှာပါ။ Tajima-Jiayuan ကိုစတင်ဖြန့်ချီမယ့်နေရာကတော့ တရုတ်ဖြစ်ပြီး မတ်လ မှာတော့တရားဝင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစီးနှင်းနိုင်တဲ့ ကားလေးဖြစ်ပြီး ပုံစံက လည်း ချစ်စရာကောင်းနေတာကြောင့် တော်တော်များများကြိုက်ကြမယ့်ကားလေးဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ Website ကလည်း မထွက်ရှိခင်အချိန်မှာ သတိပေးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတာကြောင့် (ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မမေ့ရင်တော့) ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
Automotive World, Tajima